Uyisebenzisa kanjani iMikhankaso ye-imeyile ngeGmail | Martech Zone
Uwaqhuba njani amaphulo e-imeyile ngeGmail
NgoMvulo, Aprili 20, 2020 NgoMvulo, Aprili 20, 2020 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha awudingi umboneleli ngeenkonzo ze-imeyile (i-ESP) ngazo zonke iintsimbi kunye neempempe zolawulo loluhlu, abakhi be-imeyile, ukuhanjiswa kunye nezinye izixhobo ezintsonkothileyo. Ufuna nje uluhlu kwaye uthumele kulo. Kwaye, ewe, ukuba ngumyalezo wentengiso-bonelela ngesakhono kubantu sokukhetha ukuphuma kwimiyalezo ezayo. Kulapho i-YAMM inokuba sisisombululo esifanelekileyo.
Enye into edityanisiweyo ngeposi (YAMM)
I-YAMM yinkqubo yokudibanisa i-imeyile enikwe amandla yi-Chrome eyenza ukuba abasebenzisi bakhe uluhlu (ngokungenisa okanye ngeFom kaGoogle), bayile i-imeyile ngokobuqu, bayithumele kuluhlu, balinganise impendulo, kwaye balawule ukungabhalisi konke kwisisombululo esilula.
I-YAMM: Ukudibanisa ngokulula i-imeyile ukudibanisa neMeyile kaGoogle kunye neSpredishithi
Beka abafowunelwa bakho kwiphepha likaGoogle -Beka iidilesi ze-imeyile zabantu ofuna ukubathumela i-imeyile kwiphepha likaGoogle. Ungabathatha kuQhakamshelwano lukaGoogle okanye ubangenise kwiiCRM ezinjengeSalesforce, iHubSpot, kunye neCopper.
Yenza umyalezo kwiGmail -Khetha itemplate kwigalari yethu yeetemplate, bhala umxholo wakho we-imeyile kwiGmail, ukongeza ubuqu bakho, kwaye ugcine njengedrafti.
Thumela umkhankaso wakho ngeYAMM -Buyela kwi-Google AmaSpredishithi ukuthumela kunye nokujonga umkhankaso wakho we-imeyile ngokunye ukuhlangana kwemeyile. Uyakwazi ukubona ukuba ngubani onqabileyo, ongabhalisanga, ovulekileyo, onqakileyo, ophendula imiyalezo yakho ukuze wazi ukuba ubathumele ntoni ngokulandelayo.
Ukuqalisa, vele ufake iYAMM kuGoogle Chrome. I-YAMM ilungile maxwebhu njengokuba.
Faka iYAMM kwiChannel
tags: nqakrazaamaphulo emailinboxUkulandelela i-gmailIifomathi zikaGooglegoogle g Suitekwenziwa kanjaniyam
Umdlalo weqonga: Iplatifomu yokuXhobisa ukuThengiswa kweNtengiso yeOmni